मोदी भ्रमणका २ फाइदा ३ बेफाइदा
२०७५ बैशाख ३० आईतवार | प्रकाशित १८:४३:५३
दिवस गुरागाईं । काठमाडौं ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्केका छन् । जनकपुरबाट सुरु भएको उनको भ्रमण काठमाडौं, मुक्तिक्षेत्र हुँदै फेरि काठमाडौंमा आएर सम्पन्न भएको हो ।
नेपालबाट उडे लगतै मोदीले नेपालीमा नै ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । यस भ्रमणले मलाई नेपाली जनतासँग आत्मिय हुने ठूलो अवसर प्रदान गर्यो । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको छलफल धेरै फलदायी रह्यो ।’
उनले अर्को पनि ट्वीट गरेका छन् । भनेका छन् – ‘यस भ्रमणमार्फत नेपाल–भारत सम्वन्धमा नयाँ उर्जा थपिएको छ । म नेपाली जनता तथा नेपाल सरकारले देखाएको न्यानोपनका लागि आभार प्रकट गर्छु ।’
मोदी नेपालको भ्रमणमा आउनु अघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका थिए । उनीप्रति खासगरी आक्रमक हुनेको संख्या बढी देखिन्थ्यो । विगतमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीलाई जोडेर गाली गर्नेको संख्या धेरै थियो । एउटा हिसावमा यो नाजायज पनि थिएन ।
मोदी दिल्ली फर्किनुभन्दा अघिदेखि नै उनको भ्रमण कति सफल वा विफल भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ । आजको हाम्रो विश्लेषण मोदी भ्रमणसँग नै सम्बन्धित छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भ्रमणक्रममा नेपाली मिडियालाई पाखामा राख्ने प्रयास भएको देखियो । तर, भारतीय मिडियाहरुले भने कुनै पनि खाले अप्ठेरोको सामना गर्नु परेन । यस किसिमको विभेदलाई मिडियाकर्मीले मात्र होइन, देख्ने र सुन्ने कसैले पनि राम्रो मानेनन् । जनकपुर विमानस्थलमा मोदीलाई रिसिभ गर्न पुगेका इश्वर पोखरेलको निरिहता पनि कसैलाई पचेन । उनका अगाडि अजासु मूख्यमन्त्री हावी भएको देखियो । भारतीय मिडियालाई मुक्तिनाथ मन्दिरको भिडियो खिच्न दिने नेपाली सुरक्षाकर्मीको हेलचेक्रयाईं प्रदर्शन भया । जो दुखद पक्ष हो ।
जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमका सञ्चालक प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनालको अभिव्यक्ति र मूख्यमन्त्री मोहमत लालबाबु राउतको भाषण विवादित बने । मर्यादा नाघेर प्रस्तुत भएका उनीहरु केन्द्रीय सरकारले दण्ड दिन लायक पात्र रहेको टिप्पणी सामाजिक सञ्चालमा भाईरल भयो । संसदलाई भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गराएको जानकारीमा पनि उनले मर्यादा उल्लंघन गरेको स्वीकारे ।
दुई देशवीच प्रगाढ सम्बन्ध बनाउने मोदीको चाहाना, नेपालको समृद्धिमा साथ रहने, धार्मिक पर्यटनमा सहयोग गर्ने लगायत मोदी भ्रमणका सकारात्मक पक्ष हुन् । ‘अव बुद्धको जन्मभूमी लुम्बिनी जान्छु ।’ भनेर पनि उनले अर्को स्पष्ट संदेश दिएका छन् । यसअघि बुद्धभूमीका विषयमा हुने गरेका विवादलाई उनले सकारात्मक रुपमा स्पष्ट पारिदिएका छन् । उनले बुद्धभूमी लुम्बिनी जान्छु भन्नुको अर्थ र तात्पर्य यही नै हो ।
यो भ्रमणमा सम्बन्ध सुधारको विषय धेरै उठ्यो । मोदीले नेपाली जनतासँग नाकाबन्दीमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई करेक्सन् गर्न धेरै कुरा बोले । तर, जनताले कति र कसरी बुझे भन्ने पक्ष चाहिं आउँदा दिनले बताउने छन् । तर के चाहिं भन्न सकिन्छ भने ओली मोदी बिग्रेको सम्बन्धलाई चाहिं समकक्षीहरुका पछिल्ला दुई भ्रमणले मलम लगाएको छ ।
अब सुरु गरौं मोदीको दुई दिने नेपाल भ्रमणका फाइदा र बेफाइदा सम्बन्धि जोड–घटाऊ । सर्वप्रथम उनको भ्रमणका २ फाइदाका विषय –
१. सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन पहल ।
– नाकाबन्दीले दुई किनार भएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण र भर्खरैको मोदी भ्रमणले संतुलित मात्र बनाएको छैन, न्यानो नै बनाइदिएको टिप्पणी गर्न सकिन्छ । नेपाली जनताले उनीप्रतिको ब्यवहार कसरी प्रदर्शन गर्ने हुन् त्यो भिन्न पक्ष हो । तर प्रम ओलीसँग भने सम्बन्ध सुध्रिएको बुझ्न सकिन्छ ।
– यस भ्रमणले नेपाललाई भारतले उच्च महत्वमा राखेको संदेश संसारभरी गएको छ । यसले दुई छिमेकी देश भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत मिल्ने पनि आशा गर्न सकिन्छ ।
२. विकासका परियोजना अघि बढाउन पहल
धेरैअघि देखिको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको औपचारिक रुपमा सुरुवात हुनु देखि जनकपुर अयोध्या बस सेवा सञ्चालनसम्मका कार्य प्रत्यक्ष विकासका विषय हुन् भने उनको भ्रमणले गर्ने धार्मिक पर्यटनको विषय पनि उल्लेख्य मान्न सकिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने मोदी धार्मिक पर्यटनको अघोषित एम्बेसडर नै भएका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
१. गलत सन्देश ।
– सुरक्षाको नाममा भारतीय कमाण्डो नेपाल पठाएर नेपाली सुरक्षाप्रति अविश्वास व्यक्त गरियो । जसको गलत सन्देश फैलिएको छ । यसअघि मोदीका दुई भ्रमणमा त्यस्तो केही संकास्पद घटना भएका थिए र ? थिएनन् भने अहिले आएर सुरक्षा शंका किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जो दुखद पक्ष हो ।
२. गर्नै नपर्ने नागरिक अभिनन्दन दुई पटक किन ?
– भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुर र काठमाडौंमा दुई पटक नागरिक अभिनन्दन गरियो । दुई पटक किन ? पहिलो प्रश्न यही भएको छ भने नागरिक अभिनन्दन नै चाहिं किन भन्ने अर्को गहन प्रश्नको पनि जवाफ भेटिदैन । भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल आएका उनलाई किन नागरिक अभिनन्दन गर्ने भनेर सरकारले पनि स्पष्ट पारेको छैन । सायद यसको जवाफ कतैबाट पनि आउने सम्भावना छैन ।
– जनकपुरमा भएको नागरिक अभिनन्दनमा भारतको विहारबाट हजारौंलाई लिएर आउनुको अर्थपनि कसैले बुझेन । त्यसैगरी २ नं प्रदेशका मूख्यमन्त्री र एकजना प्रदेशका मन्त्रीले मर्यादा विपरित मन्तब्य राखेर प्रदर्शन गरेको भारत भक्तिका विषयमा पनि कसैले बुझेन । प्रश्न उठेको छ, २ नं प्रदेशका मूख्यमन्त्रीको रिपोटिङ गर्ने ब्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् ? होइनभने उनलाई सम्बन्धित निकायले मर्यादा सिकाइदिनु पर्यो भन्ने आग्रह पनि सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त भइरहेका छन् ।
३. . पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार जस्तो भ्रमण ।
– भ्रमणको मिति एकलौटी ढंगले तोकेर आउनुले उनको मिसन अर्कै भएको पुष्टि हुन्छ । बीबीसी हिन्दीको विश्लेषण पत्याउने हो भने उनी भारतको कर्नाटक राज्यमा हुने चुनाव प्रचारको मौन अवधी सुरु भएपछि नेपालबाट चुनाव प्रचार गर्न आएका थिए । उनले ६ दर्जनभन्दा बढी भारतीय पत्रकार ल्याएका थिए । धेरैवटा भारतीय टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका थिए । यसअघिको उनका भ्रमणमा यस्तो भएको थिएन ।
मोदीलाई यस भ्रमणमा नयाँ सम्झौता गर्नु थिएन । नयाँ घोषणा गर्ने योजना नै थिएन । अर्थात भ्रमण किन भन्ने प्रश्नको गतिलो जवाफ नै छैन । यसअर्थ एउटा कोणवाट हेर्दा यो भ्रमण नै आवश्यक थिएन । पशुपतिको जात्रा भनेपनि अन्तत सिद्राको ब्यापारमा सीमित भयो उनको नेपाल भ्रमण ।
दिवस गुरागाईं ।